Ubax Christmas Edition | Top naadi UK | CoinFalls Online Casino
Ubax waa mid ka mid ah Top naadi UK in la soo saaro by NetEnt. Iyada oo xilli of Christmas halkan, Afyare this ayaa loogu talagalay in ay waafaqsan niyadda ah ee Christmas oo ha ciyaaryahan ku guuleysan kadis ah oo uu soo hayay dukaanka. Waxaa jira ubaxyo qurux on duntu iyo asalka bandhigeen quruxda iidan aadka loo sugayey ee Ubax Christmas Edition. The qurxinta Christmas hubin si aad u hesho ciyaartoyda galay jawiga xaflad la wareejin kasta.
dheeraad ah, waxaa jira qaar ka mid ah muuqaalada xiiso leh ku soo dayn doonaa guul culus in ciyaartoyda. Hel diyaar u ah inay ku guuleystaan ​​qaar ka mid ah abaal weyn oo wuxuu ku raaxaysan khibrad ciyaaraha sida marna ka hor la version this ee ciyaarta Top naadi UK . Xilli hubaal iftiimin doona oo aad la sifooyinka in booska waxaa lagu xoojiyey. Sidaas, suunka xidhaan iyo in ay diyaar u safar qiimo leh ciyaarta booska this.
More on Developer ee Ubax Christmas Edition
Powered by NetEnt, Ubax Christmas Edition waa madadaalo Top naadi UK in la Raaxaynay. NetEnt ayaa had iyo jeer lagu yaqaan for kulan tayo leh waxay abuurtaa oo ay hubiso in la kulanka casino kasta oo ay horumariyaan, ciyaartoyda la kulmaan waayo aragnimo cajiib ah ciyaaraha.
About saakay iyo Sida loo Play
Tani xiiso Top naadi UK ka kooban yahay 5 duntu iyo 30 paylines, oo waxaa jira calaamado kala duwan in ay leeyihiin qaar ka mid ah guul weyn oo loogu talagalay ciyaartoyda si loo helo. duntu The dhigay soohdinta alwaax oo la qurxiyey khasnadaha Christmas iyo duntu ku curinta ee sare iyo calaamadaha bixinta hooseeyo.
lacagta Guushaan ayaa goobtii lagu xoojiyay karaa Calaamooyinka kala duwan in Afyare ka kooban yahay. The ubaxa kala duwan leeyihiin kasta oo qiimaha kala duwan, akhri paytable ah in la ogaado qiimaha in kasta qaban.
moon waa Santa ee hat dibadeed ee ciyaarta Afyare iyo waxa badali doona kuwa kale si ay u buuxiyaan isku guusha. kala firdhiso waa daruurta, Waxa kale oo lacag la'aan ah ka dhigeeysa calaamad, waxaa ka qaadataa ciyaartoyda gelin wareega dhigeeysa xor ah taasi oo guul ka heli tarmeen, oo labanlaabmay.
wilds The, fidiyana, dhigeeysa free waa sifooyinka abaal iyo wareeg ee ciyaarta Afyare iyo waxa isla horumari doona lacagta kaga badiyeen.
Play Ubax Christmas Edition at Coinfalls Casino oo loo helo oo ka mid ah guul badan oo ah qaababka kala duwan ee this ciyaarta booska Top naadi UK. Ha nalalka Christmas keeno qaar ka mid ah guul la yaab leh idiin la wareejin kasta.